कुन राशिको लागि कस्तो रहला कार्तिक महिना ? हेर्नुहोस् मासिक राशिफल ! – Khabar Silo
महिना मेष राशि हुनेहरुको लागि मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। आर्थिक रुपमा महिना सुखद रहने देखिन्छ। व्यवसायमा नयाँ परिवर्तन ल्याउने मौका मिल्न सक्छ। स्वास्थ्य राम्रै रहने भएता पनि चिसो देखि भने बच्नु पर्ने देखिन्छ। पारिवारिक रुपमा भने सम्बन्ध बिग्रन सक्ला।
वृष राशि हुनेहरुको लागि महिना धेरै नै सुखद रहने देखिन्छ। महिनाको शुरुवात देखि नै धन आर्जन हुन थाल्नेछन्। खर्च बढेता पनि आर्थिक रुपमा समस्या हुने देखिँदैन। प्रेम सम्बन्ध पनि प्रगाड रहन सक्ला। वैदेशिक यात्राको समेत अवसर मिल्ने देखिन्छ।
महिना दौडधुप र संघर्षले भरिपूर्ण रहने देखिन्छ। खान-पानमा हुने लापरवाहीको कारण स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिन सक्छ। अनावश्यक हतार गर्ने बानिको कारण बन्न लागेको काम पनि बिग्रिन सक्ला। आर्थिक रुपमा पनि महिना खासै सुखद रहने देखिंदैन। पारिवारिक रुपमा भने महिना सुखद बित्न सक्ला।
बिग्रिएका काम र सम्बन्धमा सुधार ल्याउनको लागि मौका मिल्न सक्ला। महिनाभर विभिन्न प्रकारक सुख मिल्ने देखिन्छ। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक सम्पूर्ण रुपमा महिना सुखद देखिन्छ। घरमा धार्मिक अनुष्ठानको आयोजना हुने देखिन्छ। महिनाको अन्त्यमा टाढाको यात्रा हुन सक्ला।
मिहिनेतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुनुका साथै दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुने देखिन्छ। धेरै समय देखि भेट नभएका प्रियजनसंगको भेटले उर्जा थप्न सक्छ। घर-जग्गा सम्बन्धि कारोबारमा नसोचेको लाभ मिल्नेछ। अध्ययन, कला, खेल क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हात लागि हुन सक्छ। यधपी क्रोधलाई भने नियन्त्रण गर्नु पर्ने देखिन्छ।
कन्या राशि हुनेहरुको लागि महिना खासै सुखद नरहन सक्छ। सोचे अनुरुप कार्यहरु सफल नहुँदा तनाव बढ्न सक्छ। शारीरिक रुपमा परिश्रम परेता पनि प्रतिफल नमिल्ना सक्छ। यात्राले पनि निराशा जगाउन सक्ला। आर्थिक रुपमा महिना मध्यम देखिन्छ। धन संचित नगर्ने बानिको कारण आर्थिक सङ्कटले सताउन सक्ला।
जिद्दी गर्ने बानिका कारण प्रियजनसंगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुन सक्ला। महिनाको शुरुवातमै झैँ-झगडा हुन सक्ने हुँदा व्यवहार साथै बोलिमा नियन्त्रण राख्नु होला। स्वास्थ्यमा समेत समस्या देखा पर्न सक्ला। महिनाको अन्त्यमा भने स्वास्थ्यमा सुधार हुने देखिन्छ। निर्णय गर्दा परिवारको सहयोग लिनु उचित हुन सक्छ।
हरेक कार्य सफल हुँदा महिनाभर मन प्रफूल्लित रहने देखिन्छ। शत्रु समेत मित्रमा परिणत हुने महिना छ। अधिकांश समय घरमै बितेता पनि धन-प्राप्तिमा कमी नहुन सक्ला। प्रेम जीवन सुखद रहनुका साथै सामाजिक रुपमा पनि समय सोचेअनुरूप बित्ने देखिन्छ। प्रतिस्पर्धीहरूमा सजिलै विजय हाँसिल हुन सक्ला।
महिना व्यवसायी मात्र नभई जागिरेहरुको लागि पनि सुखद देखिन्छ। पदोन्नतीको सम्भावना छ। जीवनमा आउने नयाँ व्यक्तिको कारण जाँगर बढेर जानेछ। कृषिको क्षेत्रमा पनि महिना लाभदायक देखिन्छ। कानूनी रुपमा रहेका समस्या देखि छुटकारा मिल्नेछ। लागेका आरोपलाई गलत पुष्टि गर्नको लागि मित्रजनले आवश्यक सहयोग गर्नेछन्।
यस महिनामा मकर राशि हुनेहरुका हरेक इच्छा पूरा हुने देखिन्छन्। धेरै समय देखि पूरा हुन नसकेका सपना पूरा हुँदा छुट्टै प्रकारको उर्जा मिल्न सक्ला। कला क्षेत्रमा नसोचेको सफलता मिल्न सक्छ। आर्थिक रुपमा पनि महिना धेरै सुखद देखिन्छ। परिवारमा नयाँ आगमन हुन सक्छ। हतारमा निर्णय गर्ने बानिले पनि तनाव शिर्जना गर्न सक्छ।
कुम्भ राशि हुनेहरुको लागि महिना मध्यम फलदायी रहने देखिन्छ। आर्थिक लाभ सोचेअनुरूप मिल्ने भएता पनि अनियन्त्रित खर्चको कारण आर्थिक सङ्कटले सताउन सक्छ। यात्रा गर्दा संयमित रहनु पर्ने देखिन्छ। महिनाको शुरुवातमा स्वास्थ्य समस्या देखिने भएता पनि समय बित्दै जाँदा छुटकारा मिल्नेछ। शत्रु देखि सावधान रहनु होला।
मिहिनेत परेता पनि सफलता मिल्न गार्है देखिन्छ। सकेसम्म खर्चमा नियन्त्रण राख्नु होला। स्वास्थ्यमा पनि समस्या पैदा हुन सक्ला। पैत्रिक सम्पतिको कारण घरमा कलह शिर्जना हुन सक्छ। अरुको विचारमा सहमत हुन नसक्दा विवाद उत्पन्न हुन सक्ला। महिनाको मध्यमा धार्मिक यात्रा हुन सक्ला। शैक्षिक रुपमा भने महिना सुखद रहन सक्ला।
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल भाद्र १२ गते शुक्रबार इश्वी सन २०२० अगस्त २८ तारीख भाद्र शुक्लपक्ष दशमी तिथी मूल नक्षत्र प्रीति योग वणिज करण चन्द्रंमा धनु राशिमा आनन्दादि योगमा स्थिर योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन वर्षा (ज्यो.प.सरोज घिमिरे) मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) मनोरञ्जनमुलक यात्रा को सम्भाबना […]
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल पौष १५ गते बुधबार इश्वी सन २०२० डिसेम्बर ३० तारीख मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष पूर्णिमा तिथी पश्चात प्रतिपदा तिथी आद्र्रा नक्षत्र ब्रह्मा योग बालव करण चन्द्रमां मिथुन राशिमा आनन्दादि योगमा मुशल योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु धान्यपूर्णिमा, धान्यपर्वतदान, गैडुपूजा, उधौलीपर्व, धनेश्वरमेला, रानिकोट श्रीबागभैरवपर्व, भं.पू. अनन्तलिङ्गेश्वरमेला , चम्पादेवीमेला, (योमरीपून्हि,थिलापून्हि) (ज्यो.प.सरोज […]
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल चैत्र ३० गते सोमबार इश्वी सन २०२१ अप्रिल १२ तारीख चैत्र कृष्णपक्ष औसी तिथी पश्चात प्रतिपदा तिथी रेवती नक्षत्र वैधृती योग किस्तुध्न करण चन्द्रमा मिन राशिमा ११ः०९ बजे सम्म पश्चात मेष राशिमा आनन्दादि योगमा मातङ्ग योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण बसन्त ऋतु स्नानदानको लागी सोमबारे औंसी, हलो बार्ने, २५औं […]